खाना खादा के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुदैन ? - ज्ञानविज्ञान
‘जस्तो खायो अन्न, त्यस्तै हुन्छ मन । जस्तो पियो पानी, त्यस्तै हुन्छ वाणी ।’ प्राणीहरुले खानेकुरा ४ प्रकारले खाने गर्दछन् । १, चपाएर, २) चुसेर, ३) चाटेर र ४) पिएर ।
१.खाना खाँदा बोल्नु हुँदैन । जुत्ता चप्पल लगाएर, उठेर, नराम्रा कुराहरु हेर्दै र सुन्दै खाना खानु हुँदैन ।
२.दक्षिण दिशातर्फ फर्केर खाना खान हिन्दुधर्म ग्रन्थहरुमा निषेध गरिएको छ । दक्षिण दिशातिर फर्केर खाएको खानाले शरीर र स्वास्थ्यमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरु दिने गर्दछन् । त्यसकारण सकेसम्म खाना खाँदा पूर्व वा उत्तरतिर फर्केर नै खानुपर्छ । पश्चिमतिर फर्केर खानुलाई पनि ठिकै मानिएको छ ।
३.आयुर्वेदमा खाना खानु भन्दा ठीक अघि पछि र खाना खाने समयमा पानी खानु हुँदैन भनेको छ । खाना खाँदा पानी पिएमा त्यसले विषको काम गर्छ भन्ने मान्यता छ । यस कुरालाई भौतिक विज्ञानले पनि स्वीकारेको छ ।
४.खाना खाइसकेपछि बज्र आसनमा बस्नाले खाएको कुराहरु पच्दछ । खाना खाएपछि १०० पाइला हिँड्नाले शरीरलाई अनावश्यक मोटो हुन दिँदैन भन्ने कुरा आयुर्वेदमा भनिएको छ ।
५.खाने बित्तिकै सुत्यो भने अनेक प्रकारका रोगहरु लाग्छन् । मोहीले पाचन क्रियालाई मजबुत बनाउने भएकाले खाना खाएपछि मोही खानु उत्तम हुन्छ । खानेबित्तिकै ध्यान गर्न, व्यायाम गर्न, शरीरमा तेल लगाउन हँुदैन ।
६.चुठेपछि चिसो हातले आँखामा स्पर्श गर्नाले आँखा तेजिलो हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ । खाना सकेसम्म चरेशको थालमा खानु उत्तम हुन्छ ।
७.आफूले नसक्ने खाना जुठो लगाएर फाल्नु हुँदैन, यसो गर्नाले घरमा दरिद्रता लाग्दछ भनिन्छ । नरुच्ने र नपच्ने खाना खानु हुँदैन । महर्षि चरकले दीर्घ जीवनको लागि कम खाना खानु भनेका छन् ।
७.यज्ञवल्क्यका अनुसार पेटको पाँच भागमध्ये तीन भाग अन्न, एक भाग पानीले भर्नुपर्छ भने एक भाग हावाको लागि खाली नै राख्नुपर्छ । यसरी भोजन गर्ने मानिस पेटका रोगहरुबाट पीडित हुनुपर्दैन र उसले स्वस्थ र शान्तसँग आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्दछ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ ।
Don't Miss it एस्ता छन्, निम्न रक्तचाप (Low Blood Pressure)का कारण, लक्षण र घरेलु उपचार
Up Next दिनमा धेरै निन्द्रा लाग्नु डाइबेटिजको संकेत !
वास्तु शास्त्र भन्छ- घरमा यी ६ वस्तु राख्नुस् धनको अभाव हुँदैन
अधिकाँश परिवारमा कमाइ भएपनि घरमा धनको अभाव रहन्छ । घरमा पैसाको अभावले तनाव पैदा गर्छ । कतिपय ब्यक्तिलाई अत्याधिक मेहनत…
यी खानेकुरा खानुहोस, ह्याङओभर हटाउनुहोस्
केरा ह्याङओभरमा शरीरको पोटासियम कम भएको हुन्छ । पोटासियम कम हुँदा मांसपेशी कमजोर हुने, जीउ दुख्ने, रक्तचाप बढ्ने आदि हुन्छ…
शरीरका विभिन्न रोग जिब्रो वाटै थाहा पाउन सकिन्छ
लामो समयसम्म एन्टिबायोटिक औषधि सेवन गरेका मानिसहरु तथा एचआइभी संक्रमित मानिसहरु जसको मुखमा ढुर्सीको संक्रमण भएको हुन्छ उनीहरुको जिब्रो कालो…
उमेर नपुगी बृद्ध बनाउने केहि आदत
उमेर ढल्कनु वा बृद्ध हुनु प्रकृतिको नियम हो । तर प्राय मानिस बृद्ध हुने बेलासम्म पनि जवान देखिन चाहन्छन् ।…